Maalin: Janaayo 14, 2020
dalxiiska Erciyes Winter dalka Turkiga isbuucaan flagship ah 53 kun oo martida ka 90 gobolladiisa agagaarka Turkiga marti qaaday. Dadka ugu badan ee soo booqda Erciyes ee ka yimid banaanka magaalada waxay ka kala yimaadeen Istanbul, Ankara, Antalya iyo Adana. [More ...]
Dhismaha garoonka caalamiga ah ee Istanbul Sabiha Gokcen International Airport waxaa la guddoonsiiyay shahaadada LEED oo ay soo saartay Golaha Dhismaha Green-ka Mareykanka (USGBC) heer Dahab ah. Madaarka Sabiha Gokcen [More ...]
Instagram, oo ah mid ka mid ah baraha bulshada ugu weyn adduunka, ayaa ah oo keliya madal wadaagis sawir ah, laakiin sidoo kale waxay u oggolaaneysaa wadaagista fiidiyowga iyada oo lagu daro cusbooneysiinno kala duwan waqti ka dib. Instagram cusub [More ...]
Shaqada United ee Shaqaalaha Gaadiidka (BTS) shalay, tijaabadii ugu horeysay ee shilka tareenka xawaaraha sare ayaa shaaca ka qaaday masuuliyada dhabta ah ee halganka lagu doonayo in lagu muujiyo runta. Qoraalka qoraalka ah ee ay sameeyeen BTS waa sida soo socota; “Ankara - Konya [More ...]
Duqa Magaalada Istanbul Ekrem Imamoglu, Sultanbeyli'ye 20 ayaa booqasho ku tagey degmada gobolka. Imamoglu, suxufiyiintu waxay kajawaabeen su’aalo intii lagu gudajiray dib u eegistiisa garoonka ee Sultanbeyli. Khadadka metrooga ayaa kuxiran doona isbitaalka 'Başakşehir Hospital İmamoğlu' [More ...]
In kasta oo koox ka mid ah saraakiisha fulinta ee AKP ay dalbadeen in afti loo qaado Kanal Istanbul, ayaa go'aanka ugu dambeeya la gaadhay. Xisbiga talada haya ma geli doono afti. Koox ku jirta AKP iyo Madaxweynaha Dawladda Hoose ee Magaaladda Istanbul Ekrem İmamoğlu [More ...]
SAMULAŞ Jiillada Soo Socda Ayaa Noqonaya Mashruuc Xanaaq Leh: SAMULAŞ Marka la eego baaxadda “Jiilalka mustaqbalku Waxay Ahaanayaan Digtooni”, qawaaniinta ay tahay in la raaco si loo badbaadiyo isticmaalka gaadiidka dadweynaha iyo gaadiidka dadweynaha ee magaalada iyo deegaanka. [More ...]
Iyada oo shaqooyinka wadooyinka ay qabtaan Dawlada Hoose ee Magaalada Ordu 9ka bilood ee hartay, muwaadiniinta waxaa lasiiyay gaadiid casri ah. Ka sakow dariiqa kulul, xasilloonida, shaqooyinka wadada la taaban karo, furitaanka waddo cusub iyo [More ...]
Nidaamyada calaamadaha waa nidaamyada bixiya amni aan la hubin oo lagama maarmaan u ah nidaamyada tareenka sida Tram (SIL2-3), Light Metro iyo Metro (SIL4) iyagoo ku fulinaya habraacyada la xiriira waqtiga ugu habboon uguna kalsoonaanta. this [More ...]